के चाचा स्मार्ट गुगल भन्दा छ? | Martech Zone
धेरै व्यक्तिहरु जस्तै, म को शक्ति को कम आंका ChaCha। धेरै व्यक्तिले सोच्यो कि चाचा एक पागल प्रयोग हो। मानिसहरूले चाचा गाईडहरूबारे गुगलमा केवल सामग्री हेरेका र यसका साथ प्रतिक्रिया गर्ने बारेमा गिल्ला गरे।
स्कट जोन्स र चाचासँग नजिकबाट काम गर्दै छिटो-पेस, चुनौतीपूर्ण, रमाईलो… र इनामदायी छ। चाचाले एउटा कुनामा मोडिदै छ ... र मानिसहरूले ध्यान दिन थालेका छन्। अर्को महिना चाचामा पछिल्लो भन्दा धेरै रमाईलो हुनेछ ... यो म तिमीलाई वाचा गर्दछु!
के चाचाले जे कमायो त्यो ईन्टरनेटमा सब भन्दा चाँडो र सबै भन्दा धेरै प्रश्न र उत्तर डाटाबेस हो। केहि प्रश्नहरू सयौं वा हजारौं पटक सोधिन्छ ... र चाचा अब अनुरोध प्रमाणित गर्न को लागी छैन, तिनीहरू केवल प्रदान गर्न सक्छन्।
संख्याहरू निकै अचम्मका छन् ... एक लाख अनुरोधहरू एक दिनमा जवाफ दिइयो। 4.5 XNUMX लाख भन्दा बढी चक नोरिस मजाक अनुरोधहरू! यो सबै रमाईलो र खेल होईन, यद्यपि। चाचासँग वास्तविक-समय उत्तरहरू छन् हैती मा के भइरहेको छ, कसरी ठूलो ब्रह्माण्ड हो, वा व्यावहारिक उत्तरहरू जस्तै कसरी तपाईंको कपाल वा ठेगाना बाट गम निकाल्ने वा कम्पनीको लागि फोन नम्बर।
ChaCha.com यातायात मा पनि बृद्धि गर्न जारी छ - केवल सीधा अनुरोध बाट तर खोजी इन्जिनहरु बाट। गुगलले पनि याद गर्यो कि चाचाका उत्तरहरू कत्ति राम्रा छन् - खोजी इन्जिनको वृद्धि निरन्तर बढ्दैछ। साइट अब ट्राफिकको लागि सबैभन्दा ठूलो इन्डियाना वेबसाइट हो र छ धेरै सामाजिक मिडिया प्रियहरु लाई पार सिलिकन भ्यालीमा।
चाचालाई ट्रिभिया प्रश्न सोध्नुहोस् र तपाईंले सायद राम्रो राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाउनुहुनेछ! यो आफैलाई २242242२२1२ मा प्रश्न पठाउँदै वा १-800००-२224२२२२२ (२2242२२२२ हिजो चचा) कल गरेर प्रयास गर्नुहोस्। वा तपाईं मेरो साइडबारमा निर्मित नयाँ विजेटको परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। (नोट: त्यहाँ अझै केहि सफा अप छ - जस्तै कि कहिलेकाँही IE लाई किन मनपर्दैन!)।
जबकि गूगल को एक अच्छी अनुक्रमित डाटाबेस amassed छ कहाँ उत्तरहरू खोज्ने इन्टरनेटमा, चाचाले वास्तवमा उत्तरहरू फेला पारेको छ। त्यो कुनै सजिलो उपलब्धि छैन। डाटाबेस ठूलो हुँदै जान्छ र प्रणाली प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, तपाईंले प्रतिक्रियाहरूको गुणस्तर पनि बढ्दै गएको देख्नुहुनेछ। यो उत्तम छैन - तर चाचा एक उपकरण छ कि जब सही रूपमा प्रयोग गरेको छ, हुन धेरै सम्पत्ति हुन सक्छ!
चाचासँग पनि प्रचलनहरूको अन्तर्दृष्टि हुन्छ (बाँया तिर ड्यासबोर्ड हो जुन मैले पनि बनाएको छु)। ट्विटर को प्रवृत्ति भनेको के हो मानिसहरु के कुरा गर्दैछन्, गुगल प्रवृति भनेको के हो मानिस खोज्न कोशिस गर्दैछ… र चाचा सँग ठ्याक्कै प्रश्नहरु छन् जुन मान्छेले सोधिरहेका छन्। त्यो धेरै मूल्यवान जानकारी छ - कुरा जुन चाचाले पनि महसुस गर्न थाल्छ। अवश्य पनि यो त्यस्तो कुरा हो जुन जोन्स एट लगानीकर्ताहरूले सबैसँग बुझेका थिए।
पूर्ण प्रकटीकरण: चाचा मेरो एक प्रमुख ग्राहक हो।
जनवरी 25, 2010 मा 8: 54 एएम
मैले निश्चित रूपमा चा-चालाई कम महत्त्व दिएँ। जे होस्, भनिएको छ, तिनीहरूसँग जाने बाटो छ। मँ बुझ्छु कि उनीहरूले प्रश्नहरूको एक विशाल # प्रश्नहरू पाएका छन् जुन उनीहरूले मात्र खींच्न सक्छन् भनेर सोध्यो, तर मैले सामना गरेको समस्या भनेको कहिलेकाँही यो सही उत्तर होईन र यो वास्तविक व्यक्तिको साथ कुराकानी हुँदैन। तिनीहरूले केवल तपाईंलाई दिन्छन् के तपाईंलाई लाग्छ के यो उत्तम जवाफ हो सोधे जबकि तपाईले सोधेको छैन।
Q: के अधिक वर्षाले तपाईंको विन्डशील्डमा हिर्काउँदछ यदि तपाईं छिटो वा ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ।
चाचाबाट A: छिटो ड्राइभ गर्नाले तपाईंको गाडीको विरूद्ध वर्षा थोपाको वेग बढाउनेछ र फोहोर हटाउन ठूलो शक्ति हुनेछ।
मैले सोधेको जस्तो होईन, र यो कुराकानीको कुनै पनि प्रस keep्ग राख्दैन जस्तो देखिन्छ यस प्रश्नहरूको अनुसरण गर्नुहोस् यसमा कुनै प्रस have्ग थिएन।
जे होस्, तिनीहरू समग्रमा राम्रो काम गर्दैछन्, उनीहरूसँग एल्गोरिदममा केहि काम छ र यसमा केही मानवीय सम्पर्क फिर्ता ल्याउन आवश्यक पर्दछ।
जनवरी १, २०१ 25 १२::2010 अपराह्न
ब्लेक टिप्पणीहरुको लागी धन्यवाद!
चाचा गाईडहरुसँग काम गर्न जारी राख्छ र मान्यता दिँदछ कि मानवीय अन्तरक्रिया अझै पनि समीकरणमा आवश्यक छ। प्रायः उदाहरणहरू जुन मैले देखें जहाँ चाचाले गुणस्तर उत्तरहरू प्रदान गरेको छैन वास्तवमा गुणवत्ता प्रश्नहरू छैनन्। तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, पक्कै पनि, तर के यो वास्तवमै एक प्रश्न हो जुन तपाईं चाचालाई सोध्नु हुन्छ? वा तपाईं ड्राइभ गरिरहेको बेला केवल अवलोकन गर्नुहुन्छ। * DONT_KNOW *
के तपाईंले गुगललाई यही प्रश्न सोध्नुभयो? म परिणाममा देख्छु कि कसरी टक्करमा मूसलाई जोगाउने! कम्तिमा चाचा नजिकै थियो!
मलाई विश्वास छ कि चाचाको मिठाईको स्थान सीमाहरूसहित प्रश्नहरू छन् जुन हामी खोज ईन्जिनमा फेला पार्न सक्दैनौं।
फेब्रुअरी १,, २०११ 1:१:2010 अपराह्न
"संख्याहरू अचम्मै छन्? एक मिलियन भन्दा बढी अनुरोधहरू एक दिनमा उत्तर दिइयो। 4.5 XNUMX लाख भन्दा बढी चक नोरिस मजाक अनुरोधहरू!
Overall. million मिलियन वा प्रति दिन १ लाख को 4.5. million मिलियन हो? 😉
फेब्रुअरी १,, २०११ 2:१:2010 अपराह्न
Million. million मिलियन सबै समयको पाठ्यक्रम हो! 😛